Maamulada Puntland & Galmudug oo Jaangooyay Sarifka, Sidoo Kalena Xaliyay Xasaraddii Maaliyadeed
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Maaliyadda Galmudug, Maxamed Axmed Faarax ayaa ganacsatada gobolada dhexe ugu baaqay in ay socodsiiyaan Shilinka Soomaaliga oo muddooyinkii ugu dambeeyay muran ka taagnaa.
Wasiir ku xigeenka ayaa intaa kusii daray in maamul goboleedyada Galmudug, Puntlad iyo ganacsatada guud ahaan ay isla garteen in la socodsiiyo shilin Sooomaaliga balse laga foojignaado in qalalaaso maaliyadeed la kiciyo nooca uu doonaba ha ahaadee.
“Waxaan ugu digeynaa ganacsatada iyo dad kale ee dhibaateynaayo ganacsiga in ay dalka lacago been abuur ah kusoo daabacaan ama in ay suuqyada soo galiyaan” ayuu yiri Wasiirka.
Dhanka kale maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa isku raacay in la jaangooyo sarifka doolarka iyo shilinka iyagoo halkii doolar lagu sarifi doono 28,000 SOS halka 100 kii doolarna lagu sarafi doona 2,800,000 SOS.
“Waxaan go’aan ku wada qaadanay dhammaanteen (Puntland, Galmudug iyo ganacsatadaba) in hal price (qiimo) uu noqdo sarifka, hal rate in lagu qaato ama hal sicir in lagu qaato. Waxuu yahay 28,000 in halkii doolar lagu sarifo haddii (qofka) uu Garowe joogo, hadduu Gaalkacyo joogo, hadduu Cadaado, Guraceel iyo Dhuusamareeb joogaba” ayuu yiri Maxamed Axmed Faarax.
Ugu dambeyntii, Wasiir ku xigeenka waxuu ka digay in dadka lagu qasbo in ay bixiyaan qiimo ka sareeya sicirka labada maamul ay jaaangooyeen.
Halkan hoose ka dhageyso codka Wasiir ku xigeenka